Nyowani Shot pane iPhone kushambadzira, ino nguva yakanzi: Earth | IPhone nhau
Nyowani Shot pane iPhone kushambadzira, ino nguva yakanzi: Earth
Apple inowanzo tangisa shambadziro dzinoverengeka dzine chekuita nekutora mifananidzo uye mune iyi kesi tine itsva pane yeYouTube chiteshi cheCupertino firm. Nguva nenguva shambadzo idzi dzinouya kuzotiratidza mifananidzo inoshamisa yakatorwa nevashandisi ve iPhone kutenderera pasirese, uye mune iyi nyaya, sekushambadza kwakapfuura, tinovaona.Inzwi raCarl Sagan, ari kutaura nesu nezvePasi, kuratidza aya mafoto nemavhidhiyo pamwe nemunyori weaya pazasi pechiso.
Zvakajairika kuwana izvi zvitsva kushambadza nguva nenguva uye zvinotiratidza izvo iyo iPhone inokwanisa kuita uye zvakanyanya kunyanya kamera yayo. Pakupera kwevhidhiyo zviri pachena kuti mimwe michina yakashandiswa pamifananidzo iyi nemavhidhiyo, senge katatu uye software, asi izvi zvakajairika mumhando idzi dzeshambadziro, kunyangwe iyo kamera yeiyo nyowani iPhone 7 uye 7 Plus iri ivo vagadziri veaya anoshamisa ekutora uye mavhidhiyo.
Chiziviso chitsva Shot pa iPhone: Pasi
Mune izvi Apple's shambadziro nyowani yakatsaurirwa chete kune iPhone kamera tinowana mafoto enzvimbo dzinoshamisa senge Yosemite Natural Park, iyo Trango Towers, iyo Matterhorn, pamwe nemavhidhiyo ari mukufamba zvishoma kwenyuchi dzinobhururuka, masango, nzizi, mahombekombe nedzimwe nzvimbo. Pakupedzisira izvo zvavanoda kutiudza ndezvekuti isu tinofanirwa kutarisira ino yakanaka uye hombe pasi redu ratiri. Kushambadzira kwakatangwa nezuro uye kunotora miniti imwechete.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Nyowani Shot pane iPhone kushambadzira, ino nguva yakanzi: Earth
Mitatu mitambo yevana vako kuti vadzidze uye vafare Mahara kwenguva yakati rebei!
iOS 11 ichadzima yega mashandisiro atinoshandisa zvishoma, asi inochengeta data rako